« Manamasina azy amin’ny fahamarinana ; ny teninao no fahamarinana » Jao. 17:17
Ny enta-mavesatra tao amin’ny vavaka nataon’i Jesôsy dia ny hiarovana an’ireo mino Azy amin’ny ratsy ety amin’izao tontolo izao, ary hohamasinin’ny Teny. Tsy mamela petra-kevitra manjavozavo amintsika ny amin’ny fahamarinana Izy, fa nampiany hoe: “Ny teninao no fahamarinana”. Fomba izay hahatanterahan’ny fanamasinana antsika ny tenin’Andriamanitra . Tena zava-dehibe loatra noho izany ny hifankazarantsika amin’ny fampianarana masina avy amin’ny Baiboly; Tahaka ny nilain’ireo mpianatra voalohany izany mba hahafantarany ny drafitry ny famonjena no ilaintsika izany mba hahafantarana ny tenin’ny fiainana.
Tsy misy fialan-tsiny azontsika atao, noho ny tsirambina ataontsika, ny tsy ahalalantsika ireo fanambaran’ny tenin’Andriamanitra. Nomen’Andriamanitra antsika ny teniny,fanambarana ny sitrapony, ary nampanantena ny Fanahy Masina ho an’ireo izay mangataka Aminy Izy, mba hitarika azy ireo ho amin’ny fahamarinana rehetra; hahafantatra ny foto-pinoana ny fanahy tsirairay izay maniry marina hanao ny sitrapon’Andriamanitra.
Feno fampianaran-diso ity izao tontolo izao ity; ary raha tsy mandinika amim-pahavononana ny soratra Masiana isika dia hanaiky ny fahadisoan-kevitra ho fahamarinana, handray ny fomba fanaony ary hamitaka ny fontsika. Mifanohitra amin’ny fahamarinan’Andriamanitra ny fampianarana sy ny fomba fanaon’izao tontolo izao. Mila ny fanampian’Andriamanitra ireo izay maniry ny hiala amin’ny fanompoan’izao tontolo izao, ka hanompo an’Andriamanitra. Tsy maintsy hohamafisiny tahaka ny vato ny tavany, ka mitodika manakany ziona. Mahatsapa fanoherana avy amin’izao tontolo izao, avy amin’ny nofo ary avy amin’ny devoly izy ireo, ary tsy maintsy mandeha manohitra ny saina sy hery miasa manginan’izao tontolo izao.
Hatramin’ny fotoana niatrehan’i Kristy ireo fitsaratsarana an-tendrony sy ny tsy finoana feno avonavona teo amin’ny olona, dia tsy nisy fiovana ny fihetsik’izao tontolo izao mikasika ny fivavahan’i Kristy. Tsy maintsy miatrika toe-tsaina feno fanoherana sy fanomezan-tsiny toy izany ireo mpanompon’i Kristy, ary tsy maintsy mandeha “eo ivelan’ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny” Heb. 13:13.
Naseho tamin’ny alalan’ny fahagagana mandresy lahatra ny iraka nampanaovina an’i Kristy. Nahatalanjona ireo vahoaka ny fampianarany. Izany dia tsy teny saropantarina toa mifanohitra, toy ny fanaon’ireo mpanora-dalàna, feno fandrebirebena, vesaran’ny fampianarana mifanohitra sy fitakiana tsy misy fotony, fa rafitry ny fahamarinana izay mamaly ireo hetahetan’ny fo. Tsotra sy mazava ary mora azo ny fampianarany. Nanana ny hery mandresy lahatra ary nampifantoka ireo vahoaka ny fahamarinana azo ampiharina nambarany. RH, 7 Febroary 1888.